Amazon inowanikwa muSwitzerland | ECommerce nhau
Amazon inowanikwa muSwitzerland
Kupinda kweAmazon kuenda kuSwitzerland e-commerce musika iri pedyo nharaunda. Iyo American e-commerce hofori yakasaina chibvumirano chekushandira pamwe Swiss Post, zvinoreva kuti posvo agency ichatarisira mirairo ye Vatengi veAmazon munguva pfupi iri kutevera.
"Tinotarisira kuti mapakeji ekutanga achasvika kwavanosvika munaZvita kana Ndira," mumwe munhu akabatanidzwa akadaro, maererano naBilanz. Fliex Stierli, ndiani musoro we basa repositi kuSwitzerland Post, yakasimbisa kuti kambani yepositi iri kutaurirana neAmazon. "Asi kuchine akawanda mashandiro ekushandira ayo anoda kujekeswa," akawedzera. Amazon yakasimbisawo kufarira kweSwitzerland mumusika we e-commerce. "Hatisi kufuratira Switzerland," akadaro Ralph Kleber, maneja weAmazon.de. “Vatengi veSwitzerland vakakosha zvikuru kwatiri. Amazon zvirokwazvo haidi kuodza moyo vatengi ava. "
Izvo zvinonzi maitiro etsika anotora anokwana maawa matatu, izvo zvinobatsira kuti kuendesa mumaawa makumi maviri nemana zvichibvira mune ramangwana. Amazon inopa iyi mhando yekuendesa sechikamu chekupa kwayo kune yayo Prime nhengo. With Amazon PrimeVatengi muSwitzerland vanozokwanisa kuwana zvese zvinopihwa kuAmazon, zvinosanganisira kuwanikwa kwekutenga nekutsvaga zvigadzirwa zvemamirioni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva kukabhuku kako kari pamhepo. Amazon yatove nemhando iyi yezvipo munyika dzakasiyana dzakakomberedza European Union senge Netherlands, Austria neTurkey umo Amazon ichangoburitswa.
Kuzivisa izvi e-commerce mogul Mune dzimwe nyika dzeEurope, unogona kushandura iyi e-commerce kambani, iyo yakatanga sekambani yaive online chete, kuti ive kambani yakakura seyomisika misika iyo yakakura zvishoma zvishoma zvishoma pamusoro pemakore. Amazon inoenderera ichitifadza nekufambira mberi kwavo uye isu tichatarisira zvakawanda kubva kwavari mugore rino 2018.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Amazon inowanikwa muSwitzerland
E-commerce muNetherlands ichave ine kukosha kwemamirioni makumi maviri nemaviri emaEuro muna22
Vatengi veFrance vakashandisa mari yakawanda paKisimusi iyi